Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo gaaray magaalada Khartoum ee dalka Sudan (Sawirro). – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa xalay gaaray magaalada Khartoum ee Caasimada Sudan, halkaasoo uu kulamo uu kula qaadan doono dhigiisa dalkaas.
Wasiirka ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum Saraakiil ka tirsan Xukuumada Sudan, Diblomaasiyiinta Safaarada Soomaaliya ee Khartoum, waxaana wafdiga Wasiirka Gaashaandhiga la dejiyay mid ka mid ah Hotelada ugu waa weyn Khartoum.
Maxamed Sheekh oo la hadlay warfidiyeenada ayaa sheegay in booqashadiisa Sudan ay la xiriirto, sidii uu loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sudan, waxaana uu tibaaxay i casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa Sudan.
“Waxaa casuumaad ka helay wasiirka gaashaandhiga Sudan C/raxiin maxamuud Xuseen, waxaa kala hadli doonaan arrimo badan oo xiriirka labada dal iyo sidii labada Wasaaradood ay u wada shaqeyn lahaayeen xiriir joogtana u dhex mari lahaa”ayuu yiri Maxamed Sheekh.
Mar uu ka hadlay xaalada ammaan ee dalka ayuu sheegay in is bedelo badan uu ka jiro dalka, isagoo xusay in haatan ay ka soconayaan gobolada dalka howl galo Al-Shabaab looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka.
Idale News Online, Khartuum.